५० वर्ष अघि सुर्खेत र दैलेखमा पुल बनाउने दलविरको कथा (फोटोफिचर) « Rara Pati
५० वर्ष अघि सुर्खेत र दैलेखमा पुल बनाउने दलविरको कथा (फोटोफिचर)
केही वर्ष अगाडी चीनमा एउटा अनौठो घटना संसार सामु आएको थियो । सन १९५९ मा चीनको एक गाँउमा खडेरी पर्दा अनिकाल भएको थियो । करिव एक वर्षसम्म वर्षा भएन । गर्मीले साना साना पोखरी र खोलाहरु पनि सुके । गाउँलेको यो समस्यालाई देखेर २३ वर्षीय एक चीनियाँ युवाले आफ्नो गाउँमा रहेको पानीको समस्या देखेर केही गर्न गाउँलेसँग सल्लाह मागे । करिव १० किमी टाढा रहेको खोलाको पानी नहर बनाएर गाउँसम्म ल्याउन पाए गाउँमा पानीको समस्या नहुने भन्दै सहयोग मागे । तर, गाउँलेले सहयोग दिनुको सातो उनलाई पागल भने । नभन्दै उनी पागल नै बने । उनले एक्लै नहर खन्न थाले । गाउँलेले पागल भनिरहे तर उनले खन्न छोडेनन् । ३० वर्षसम्म एक्लै नहर खनीरहे । सन १९९० मा गाउँको नजिकै नहर आइपुगेपछि बल्ल गाउँलेले थाहा पाए । यो काम सम्भव रहेछ । सिंगो डाँडाको कडा चट्टान काटेर उनले नहर गाउँसम्म पु¥याएरै छाडे । ३६ वर्ष लाग्यो हुआंग डाफालाई एक्लैले नहर खनेर गाउँलेलाई मिठो पानी खुवाउन ।
साहस र हिम्मत हुनुपर्छ एक्लैले पनि असंभव भनिने कामहरु गर्न सकिन्छ । केवल चीनमा मात्र होइन यस प्रकारको उदाहरण अन्यत्र पनि भेटिन्छ । तर म यहाँ नेपालको एक साहसी र हिम्मती ब्यक्तिको चर्चा गर्न गइरहेको छु ।
दैलेख जिल्लाका दलवीर सिंह जन्मले कामी थिए । अक्षर केही चिन्न सक्ने तर आफ्नो मेहनतमा बाँचेका । उनको आफ्नो आरन थियो । जहाँ फलामका कामहरु गर्दथे । उनको काम प्रति लगन र मेहनती थियो । बिसं २०१९ साल तिर उनलाई भेरी नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउन इच्छा जाग्यो । उनि धनी भएर झोलुङ्गे पुल बनाउन लागेका थिएनन् । वर्षातमा उर्लेर आउने भेरीको भेललाई देखेका थिए । यसैले उनलाई एउटा पुलको आबश्यकता लाग्यो । उनले आफ्नो शीप र ज्ञानको उपयोग गर्दै आबश्यक सामग्रीहरु आफैले तैयार गर्न थाले । लामो फलामे तार तथा अन्य सामग्रीको सहयोगले पुलको तैयारी गर्न थाले । गाउँलेले पुलको खाँबो गाड्न तथा पुलको भार थेग्नको लागी मोटो तारलाई ठूलो खाल्डोमा पर्याप्त ढुङ्गाहरु राखेर बाँध्नमा सहयोग गरे । हिड्नको लागी काठका साना साना फल्याकहरु लहरै बाँधे । दायाँ बायाँ मानिस पुलबाट नखसोस भनेर त्यहाँ पनि बलियोसंग तारहरु बाँधे ।
२०२० सालमा सुर्खेत जिल्लाको उत्तरगंगाको भेरी नदीमा करिव ४३५ फुट लामो झोलुङ्गे पुल तैयार भयो । पुल तैयार भएपछि मानिसहरुलाई धेरै सहजता भयो । सुर्खेत जिल्लाको उत्तरगंगामा भेरी माथि बनाइएको यो पुलको बारेमा राजा महेन्द्रलाई पनि सुनाइएछ । शायद कसैले राजासम्म खबर पु¥याएको थियो होला । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रको सुर्खेत भ्रमणमा राजाले दलवीर सिंहलाई भेटे । उनको काम देखेर राजाले उनको कामको निकै प्रशंसा गरे साथमा खुशी भएका राजाले तत्कालै रु. ४०० बख्सिस पनि दिए । साथमा दलवीर सिंहलाई जागिर मिलाइ दिन पनि लगाए ।
केवल ३ कक्षासम्म पढेका दलवीरलाई राजाको आदेश पछि उनको काम र सीप अनुसारको काम दैलेख जिल्ला पंञ्चायतले दिए । उनलाई सव–ओभरशियरको जागिर लगाइदिए । पुल बनाउने राम्रो ज्ञान भएको हुँदा उनको जिम्मामा झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी कामको थियो । सबै काममा केवल पढाइले मात्र हुदैन । अनुभव र ज्ञान पनि हुनुपर्छ । यो दुबै दलवीरको साथ थियो । थिएन त केवल पढाइ थिएन । कनीकुथी अक्षर पढ्न र लेख्न जानेकै थिए । तर इञ्जिनियर पढेकै थिएनन् । तर पनि सव–ओभरशियरको रुपमा जागिर पाए ।
जागिरे भएपछि उनको निरीक्षणमा दैलेख जिल्लाका लोहोरी खोलाको चुप्रा पुल र छमघाट खोलाको झोलुङ्गे पुल बनाइएको थिए । छमघाट खोलाको झोलुङ्गे पुल बनाउने सामग्री खरीदको लागि भने दलवीर कानपुर पनि पुगेका थिए ।
नेपालगञ्जदेखि सुर्खेतको सडक रेखांङ्कन गर्ने दलवीर सिंह कामी मारिए वा आत्महत्या गरे ?
एमाले १०औँ महाधिवेशन : पाँच लाख सहभागी, चन्दा नउठाउने, नारायणी किनारमा ‘भेन्यू’ हुन सक्ने
५ कार्तिक, चितवन । नयाँ नेतृत्वका लागि नेकपा एमालेले १०औँ महाधिवेशन चितवनमा गर्ने भएको छ
देउवा अर्ली इलेक्सनमा सकारात्मक हुन् ? भन्छन्- गठबन्धनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ
५ कार्तिक, धनगढी । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैशाखमा ताजा जनादेश ९अर्ली इलेक्सन० गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनसँग
कार्यादेश छैन, कार्यालय कुर्ने तलब बुझ्ने, सेवाग्राही मारमा
५ कार्तिक, रुकुम पश्चिम । आफ्नै घर, आँगनमा यातायात कार्यालय भए पनि काम लिनका लागि
प्रधानमन्त्रीले भने- देशभरको बाढीपहिराेकाे अनुगमन गरेर सरकारले थप राहतको व्यवस्था गर्छ
सुर्खेत, ४ कात्तिक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगातारको वर्षाका कारण भएको क्षतिको अनुगमनपछि राहत दिने
बाढीपहिरोबाट ८८ जनाको मृत्यु, ३० जना बेपत्ता
४ असोज, काठमाडौं । गत आइतबारदेखि सुरू भएको अविरल वर्षाका कारण आज बिहानसम्म देशभरमा ८८
विदेशी पर्यटकसहित १२ जना हिमपातले तुम्लिङमै फसे, हेलिकाेप्टरमार्फत उद्धारकाे तयारी
४ कार्तिक, हुम्ला । हुम्लाकाे नाम्खा गाउँपालिकास्थित हिल्सा र लिमीको ट्रेकिङमा हिँडेका विदेशी पर्यटकसहित १२ जना बाक्लो हिमपातले लिमी